iElegance? Isonto lokuqala lokuthuthela kwami ​​kwi-MacBook Pro | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 29, 2006 Douglas Karr
Okwamanje, usuvele ugcwele izikhangiso ze-Mac vs. PC:
Iqiniso ukuthi angiqiniseki ukuthi babethela ukuthi yini abasebenzisi beMac abayijabulelayo. Akungabazeki ukuthi yonke i-iLife, iMovies, iTunes, njll kuhle ukuyisebenzisa. Futhi, akumangazi ukuthi abantu bokudala bathanda ukusebenzisa iMac. Okunye kungenzeka ukuthi abantu abanjengo-Adobe nezinhlelo ezifana neQuark baqale nge-Mac.
Into engikholelwa ukuthi i-Apple ayikho kulezi zikhangiso ubuhle be-interface yomsebenzisi. Yize iWindows iguqukile futhi yalingisa izici eziningi ze-Apple, kusamele babambe kalula ukusetshenziswa.
Ngizokhombisa iminyaka yami lapha, kepha ngiqale kule mboni ngokuhlela iladi logic ku-Programmable Logic Controllers (PLCs), ngathuthela ku-DOS, ama-PLC ahlanganisiwe aya ku-DOS, futhi ngathuthukisa, ngafaka futhi ngasebenzisa izinhlelo zokusebenza ku-Microsoft Windows, IBM OS2 I-Warp / Warp Server, njll. Akukaze kube lula, kepha bengilokhu ngiziphonsela inselelo ekufundeni nasekuzameni ukwenza ngokuzenzakalela nokuhlanganisa ngokwengeziwe. Nginokuhlangenwe nakho okuningi, futhi ungasho ukuthi ngiyi-'Microsoft Guy ', ngiyisebenzise njengethuluzi lami eliyinhloko emisebenzini yami kulo lonke umsebenzi wami.
I-OSX (Mac's Operating System), ayiminyene kakhulu, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyisebenzisa, ukwenza ngezifiso, ukuhlanganisa, njll. Ukukutshela iqiniso, esinye sezikhathi ezimnandi kakhulu enganginaso kwaba lapho ngangingakwazi ukuthola ukuthi ngiyifaka kanjani uhlelo. Angibonanga ukuthi ngingavele ngiyihudulele kufolda yami Yezicelo. Awufisi yini ukuthi kube lula ku-Windows? Sheesh.
Ngokuqondene nokusebenzisana emsebenzini (siyisitolo seMicrosoft), angibanga nezinkinga. Akunazinkinga ukungena kunethiwekhi, ukufinyelela ezintambo ezingenantambo, ukusebenzisa iHhovisi nokuthumela nokwabelana ngamafayela. Kube buhlungu impela. Nginokufana okusebenzayo 'uma kungenzeka' ngidinga ukusebenzisa i-XP… kepha ngiyikhipha ku-Window ku-Mac (iyamangalisa). Lapho ngineMicrosoft Access neMicrosoft Visio.
Ngakho-ke… igama lami lokuqala bekufanele libe yi-Elegance. I-Apple yenza umsebenzi omuhle kusibonisi esihle, esilula esisebenza ngokuphelele. Lapho ngishintshe kusuka ku-PC ngaya kwi-PC esikhathini esedlule, ngokwethembeka kuthathwe isikhathi esiningi kunalokho okufanele kushintshele ku-Mac. Ngihlabeke umxhwele.
Okthoba 30, 2006 ngo-5: 42 AM
Uyemukelwa emhlabeni omuhle we-Mac 🙂
Ngithole ukuvezwa kwami ​​kokuqala kwe-Mac kuma-80s okuqala, lapho ngibona idemo eyayigcizelela iqiniso lokuthi ama-Mac ayenobungane (njengokuthi "Sicela ufake idiski" ngokungafani ne- "insert disk"). Lapho ngihlala unyaka e-US e-1986, isikole sasinama-Macs kuphela. Bekulula kakhulu ukuxhumana nazo, futhi yeka intelezi yokwenza ihluzo (namuhla, umuntu angazibiza ngokuthi "ihluzo"). Kwaphela iminyaka ethile ngisebenza nama-PC, ikakhulukazi ngesizathu sokuthi njengomfundi ngangingenakukwazi ukuthenga iMac ngaleso sikhathi. Bese futhi ngine-Mac enhle (5200), ebiyandulelayo, yize ingaphumelelanga kangako, ye-iMac. Bese futhi, lapho iWindows XP iphuma, ngalingwa ukuthi ngithenge iSony Laptop. Akukona nje ukuthi ukwesekwa kwe-tech kwamunca nje kuphela, ngaleso sikhathi ngaqala ukwenza imali ngevidiyo, futhi ukuqala kabusha i-PC yakho njalo ngehora nekhasimende elihleli eduze kwakho, kwakungeyona into enhle. Ngakho-ke sigxumele ku-Final Cut bandwaggon, esivele inenguqulo engu-1.25. Awuzange uzisole kanye. Namuhla siyi-2 ehhovisi, futhi sinama-Mac ama-5; konke kusuka ku-Mac mini encane, umbhoshongo wakudala we-G4 (ungacabanga nge-PC eneminyaka engu-7 ebukeka ihle, futhi isasebenza?) kuze kufike ku-G5 enezinqubo ezi-4.
Ngezansi: Ama-Mac angabiza kakhulu esigabeni sokuqala, kepha alonga kakhulu ezindlekweni zokukhiqiza, kumnandi ukusebenza nawo, kuphephile kuma-virus. Zisebenza nje.